Mitambo yePSL Yotanga Isina Rutsigiro rweMari
Chikwata chaMonomotapa chinoti chagura hukama hwacho nevaimbove murairidzi vechikwata ichi vaRodwell Dhlakama kubvira kuoera kwemwedzi wapera.
Mitambo yenhabvu yepamusoro-soro munyika, ye Premier Soccer League, kana kuti PSL, iri kutanga musi wa 17 Kubvumbi pasina mibairo yemari ichapihwa zvikwata zvenhabvu pakupera kwegore, sezvinosiitika makore ose.
Mibairo yemari iyi ichange isiko gore rino, sezvo pasina kambani yakavimbisa kutsigira p-s-l nemari inodiwa.
Vanoronga mitambo ye p-s-l, va beadle musa gwasira, vanoti havana rutsigiro rwavati vawana kubva kumakambani akawanda avakataura nawo.
Vagwasira vanoti kushaikwa kwemari yerubatsiro ndiko kwakanonotsa kutanga kwemitambo gore rino.
Makore apfuura, mitambo ye PSL yanga ichitanga svondo rekutanga muna Kukadzi, achipera kupera kwaMbudzi.
Gore rapera, mitambo ye PSL yakatanga isina kambani yakaisa mari, mushure mekubuda kwebhanga re Commercial Bank of Zimbabwe muhurongwa uhu. Asi bhanga iri rakazopa zvikwata mibairo yemari richitenda kushandiswa kwaive kwaitwa zita raro gore rese ne PSL.
Asi CBZ haina kuzokwanisa kupa mari yekufambisa chirongwa ichi, pamwe nembatya dzekutambisa bhora, izvo zvinowanzoitwa nekambani inenge yazvipira kutsigira PSL nemari.
Mune imwewo nyaya, chikwata cheMonomotapa chinoti chabvumirana nevaimbove murairidzi wechikwata ichi, Va Rodwell Dhlakama, kuti vagure hukama hwavo kutanga waKubvumbi.
Chikwata ichi chinoti hachisisiri kuenderera mberi nenyaya yachanga chaendesa kumapurisa chichipomera VaDhlakama mhosva yekutengesa mimwe yemitambo yechikwata ichi yaitambirwa kunze kwenyika pamakwikwi e Confederation of African Football (CAF) Champions Leagure gore rapera.
Munyori wechikwata cheMonomotapa, VaDavid Makombe, vanoti vari kutarisira kutanga mitambo yavo musi wemugovera apo pachatanga mwaka wegore rino.
VaMakombe vanoti chikwata chavo chichatamba mutambo wacho wekutanga nechikwata cheEagles kunhandare ye Rufaro muHarare.